Ny horonan-tsary amin'ny pejy fitobiana dia mampitombo ny fiovam-po 130%
Mampitombo ny fiovam-po 130% ny horonantsary amin'ny pejy fitobiana
Alahady, Jona 13, 2010 Alahady, Jolay 27, 2014 Douglas Karr
Efa nisy antontan'isa sasany maharesy lahatra an'ity horonantsary ity mampiakatra ny tahan'ny fiovam-po amin'ny mailaka 200% ka hatramin'ny 300%. Ny video dia manomboka mitana andraikitra lehibe amin'ny fantsona marketing rehetra. Imavex dia orinasam-pampandrosoana tranonkala antsoina hoe iray amin'ireo orinasam-pivarotana motera fikarohana ambony ao amin'ny firenena.
Niresaka tamin'i Ryan Mull aho ary niresaka izy ireo fa nahatsikaritra ny fanatsarana be ny tahan'ny fiovam-po-per-click an'ny mpanjifany rehefa mampiditra horonan-tsary avo lenta amin'ny pejy fandraisana.
Ny vaovao tsara dia, mazava tsara ny angon-drakitra, ary lehibe ny databatra hanehoana ny tena valiny. Amin'ny alàlan'ny fampidirana horonantsary amin'ny pejy fitobiana SEM / PPC, ny mpanjifa dia nahita fitomboana 130.5% amin'ny fitarihana azo avy amin'ny fampielezan-kevitra. isaky ny Ryan Mull, Imavex
Imavex dia nanakodia sehatra fampiantranoana horonantsary, Streamotor, izay ampiasain'izy ireo hampiantranoana sy hanompoana ireo horonantsary avo lenta ireo.
Ny vidiny ho an'ny horonantsary miorina amin'ny tranonkala mifangaro tsara dia mety miovaova amin'ny vidiny. Misy loharanom-pahalalana horonantsary vitsivitsy eo an-toerana izay afaka manao horonantsary latsaky ny $ 1,000 avy. Ny horonan-tsary matihanina bebe kokoa dia mety mitentina 2,500 $ no ho miakatra - fa raha mampitombo ny fiovam-po amin'ny 130% ianao dia tsy dia mila maka vola miverina amin'ny fampiasam-bola tsara!
Tags: ny fihenan'ny fiovammitombo ny fiovam-pofiantsonana pejypejy pejyLahatsary Marketingtaham-panovana video
WordPress 3.0 - Tsy afaka miandry aho!
Ento mody any an-trano hatrany ny tolona
14 Jun 2010 amin'ny 9:01 AM
Mampalahelo, saingy marina amin'ny zavatra hitako.
Na ny habe, ny tahan'ny lafiny, ary ny fametrahana eo amin'ilay tranonkala dia misy tsy fitovizany… diso, ka nolazaina tamiko
Jun 14, 2010 ao amin'ny 1: 12 PM
Azonao zaraina ve ny sasany amin'ireo 'loharanom-pahalalana horonantsary eo an-toerana' notononinao? Mitady hanao horonantsary misimisy kokoa izay tsy mahita ireo mpivarotra mety aho.
Jun 14, 2010 ao amin'ny 2: 10 PM
Oay! Iza no namorona ity horonantsary ity? Te hihaona amin'izy ireo aho. Misy afaka mampahafantatra ahy ve?
15 Jun 2010 amin'ny 10:49 AM
Eto Indianapolis, loharanom-pahalalana horonantsary dia Imavex (http://www.imavex.com), Cantaloup (http://www.cantaloupe.tv), Endrika hafa mahafinaritra
Stars Media (http://12starsmedia.com) eo an-toerana - samy manao asa lehibe avokoa izy ireo ary miovaova ny vidiny sy ny vokatra.
20 Okt 2014 amin'ny 2:50 PM
Miasa ao amin'ny maso ivoho mpamaky horonantsary monina ao Toronto antsoina hoe LaunchSpark Video aho, ary hitanay fa tsy ny video ihany no nanampy tamin'ny fampitomboana ny varotra ho an'ny mpanjifanay, fa izy io koa dia fitaovana tsara ho an'ny paikadim-piainan'izy ireo amin'ny ankapobeny. Betsaka amin'ireo mpanjifanay no nampiasa ny horonantsary manazava azy ireo amin'ny fampisehoana varotra sy fampisehoana ihany koa, ary amin'ny fanomezana ny mpijery topimaso vetivety ny vokatra / serivisin'izy ireo dia nahatonga ireo mpijery ireo ho mpitarika. Ny fahafaha-mampihatra horonantsary mora sy mahomby amin'ny fantsona maro dia zavatra iray hafa mahatonga azy io ho fitaovana marketing lehibe!
Oct 21, 2014 amin'ny 2: 04 AM
Lahatsary mahafinaritra, Fabio!